Ma aragno wax aan uga cararno Addis ababa: safaarada Ruushka - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Ayadoo wadamada reer galbeedka ee taageera Tigreega kuna riyoonaya inay fishaan inay dalka dib u qabsadaan ay qaarkood bilaabeen inay dadkooda kala baxaan Addis ababa, ayaa safaarada Ruushku tidhi ma aragno wax aan uga cararno Addis ababa.
”Caasimadu waa amni mana jiraan wax uu ka bedelay amarka degdega ee lagu soo rogey ayay qoraal ku tiri safaarada Ruushku. Ujeedada reer galbeedka ayaa ah inay abuuraan khalkhal siyaasadeed oo aan jirin ayuu yiri Xirsi Warfaa.
Ciidanka amniga ayaa kordhiyay amniga caasimada ayagoo geed dheer ku xidhey Tigreegii deganaa si ayan u abuurin khalkhal amni. Maamulka Oromada ee ka taliya caasimada ayaa sheegay tusaale ku filan ka helay Dessie oo Tigreegii deganaa gadaal uga yimaadeen ciidankii dawlada.